Somali News 03.24.2021 | KWIT
Somali News 03.24.2021
By Halima Osman • Mar 24, 2021
Wareeg cusub oo kiro ah iyo gargaar koronto ayaa bixin doona gargaar ilaa 12 bilood ah oo loogu talagalay dadka ay saameeyeen cudurka faafa ee Iowa. Badhasaabka Kim Reynolds ayaa maanta ku dhawaaqay shirkeeda jaraa’id ee todobaadlaha ah maanta.
Barnaamijka Iowa Rent iyo Barnaamijka Caawinta Qalabka ayaa furi doona Isniinta. Waxaa ku jiri doona $ 195 milyan oo doolar oo ka timid xirmada gargaarka ee dowladda dhexe ee COVID-19. Caawimadu waxay dabooli kartaa lacag bixinta kirada waqtigeedii dhaaftay, biilasha korontada ee waqtigeedii dhaafay, iyo kaalmada kirada mustaqbalka. Gobolku wuxuu bixin doonaa ilaa afar bilood oo ah gargaar bixinta deynta guryaha si looga caawiyo inay ka fogaadaan la wareegitaanka guryaha ee la xiriira cudurrada faafa.
Iowa waxay ku sii socotaa wadadii loo furi lahaa xaq u yeelashada talaalka dhamaan dadka qaan gaarka ah laga bilaabo Abriil 5. Badhasaabka Reynolds ayaa maanta sheegay in gobolku rajaynayo inuu helo kor u qaadis la filayo ee qoondaynta tallaalka toddobaadyada soo socda. Xilligan, Iowans xirfadaha qaarkood, oo da'doodu tahay 65 iyo wixii ka weyn, iyo kuwa leh xaalado caafimaad oo salka ku haya oo u horseedi kara kiisaska daran ee COVID-19 ayaa xaq u leh tallaalka, in kasta oo ballamaha tallaallada ay wali adag tahay in la helo.
Reynolds ayaa maanta u duceeyay qoyskii, asxaabtii, iyo shaqaalihii laba shaqaalahooda ka tirsanaa oo Talaadadii lagu dilay Xabsiga Gobolka Anamosa. Reynolds ayaa sidoo kale dadka ka codsatay inay dulqaad muujiyaan oo ay ixtiraamaan qoysaska maadaama ay saraakiishu sii wadaan baaritaanka waxa dhacay.
Dadku waxay iibsan karaan qoryaha waxayna wadan karaan qori gacmeed iyagoo qarsoodi ah iyaga oo aan marka hore helin ogolaanshaha gobolka ee gobolka iyada oo la raacayo biilka Golaha Guurtida ee Iowa ay ansaxiyeen una direen Gudoomiyaha Gobolka Reynolds. Sharciga ayaa meesha ka saari doona shuruudaha ogolaanshaha gobolka ee hadda jira iyo baaritaanka soo socda ee la socda.
Qareenada gobolka Iowa ayaa waydiisanaya maxkamada sare ee gobolka inay ka laabato xukunka kiiska uu gudoomiyihii hore ee magdhowga shaqaalaha uu ku andacooday takoorida khaniisiinta
Dacwadda asal ahaan ka soo jeeda Sioux ee Chris Godfrey dacwadda lagu soo oogay eex-nacaybka ka dhanka ah ayaa ku dhiirrigelisay Branstad inuu dhimo mushaharkiisa ka dib markii uu diiday inuu u hoggaansamo amarrada iscasilaadda markii uu guddoomiyaha gobolka la wareegay 2011.
Somali News 03.23.2021
By Halima Osman • Mar 23, 2021
Tyson Foods waxay siin doontaa tallaalka COVID-19 shaqaalaha warshaddeeda hilibka lo'da ee magaalada Dakota City, Nebraska Jimcaha. Hadal qoraal ah, shirkaddu waxay ku sheegtay inay tahay dadaal lagu hubinayo in shaqaaluhu ay "marin u helaan" tallaalka.
Xarunta lagu farsameeyo hilibka lo’da ayaa waxaa ka shaqeeya in ka badan 4,000 oo qof waana mid ka mid ah dhirta ugu weyn ee hilibka lo’da ee dalka. Qiyaastii kala badh shaqaalaha ayaa ka yimid Iowa.